Kenya oo dhistay 10km oo ah gidaarka xadka Soomaaliya, balse fadeexad ayaa ka taagan
BERBERA Warka Xuska 18may ee Degmooyinka Sheekh Abdal+Bulaxaar+xagal+Go,da wayn + Laasciidle
Gudoomiye cabdiraxmaan Cirro oo Jawaab Kusoo Bixiyay Facebook giisa kasoo qaybgal la,aantii xuska 18 may
Ina Cumar Geele ma dayrkii Makuu Gubayaa haduu hargaysa Yimaado, Faysal cali Warabe oo ugu Baaqay Geelaha Jabuuti
Suxifiga+Siyaasiga ah ee Yuusuf garaad oo Ka Jawaabay Xuska 18 may maalinta qaranka somaliland leeyahay iyo madaxbanaanida daleed ee somaliland
Berbera, Maareeyaha wakaalada hamaha Shidaalka Berbera oo Munaasibada 18 hambalyo u diray umada so
Xisbiyada Siyaasada Itoobiya Oo Shir Xasaasi Ah Ku Leh Addis Ababa Iyo Raysal Wasaaraha Oo Qayb Ka Ah
Wargeyska Standard: Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga oo lagu xusay fadeexad ku saabsan dahab been abuur ah
Maxaa ka jira 'fadeexadda' ay warbaahinta caalamiga ah ka faafiyeen haweeney Soomaaliyeed oo 69 jir ah?
Dowladda Kenya waxa ay markii hore ku dhawaaqday in ay darbi 700km ah ka dhisi doonto xadka ay la wadaagto Soomaaliya, si ay xuduudda u xirto isla markaana u hakiso dagaallameyaasha Al-Shabaab ee uga soo tallaabaya dhinaca Soomaaliya.
Balse markii dhismaha la billaabay sannafkii 2015-kii, darbigii waxaa loo baddalay silig.
Baarlamaanka Kenya ayaa hadda hor istaagay in dhaqaale dheeraad ah lagu bixiyo mashruucan, ilaa inta ay dowladdu sharraxaad ka bixineyso qaabka malaayiin lacag ah loo kharash gareeyay ilaa hadda, sida uu qoray warkeyska kasoo baxa Kenya ee The Standard.
Lacag dhan Sh3.3 bilyan oo shilinka Kenya ah una dhiganta ku dhawaad 35 milyan oo doolar ayaa lagu dhisay 10km oo ka mid ah siligaas xadka laga sameeyay, sida lagu sheegay warbixin la hor geeyay baarlamaanka Kenya.
Marka la isbarbar dhigo lacagta baxday iyo masaafaha siliga ah ee la dhisay, waxay u muuqataa in 1km oo kasta lagu dhisay 300 milyan oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta qiyaastii 3 milyan oo doolar.
Arrimahan shaaca laga qaaday ayaa ka careysiiyay xildhibaannada baarlamaanka oo dalbaday in sharraxaad buuxda la siiyo.
Lacagta ilaa hadda ku baxday dhismaha darbiga siliga ah ee xadka Kenya iyo Soomaaliya, oo 10km kaliya laga hirgaliyay ayaa labanlaab ka badan dhaqaalaha ay dowladda Kenya sannadkan u qoondeysay istiraatiijiyaddeeda keydka raashinka.
Waxa ay sidoo kale ku dhawaad 1 milyan oo doolar ka badan tahay kharashka uu waddanka ugu talo galay inuu ku baxo adeegyada caafimaadka ee dadweynaha.
Intaas waxaa sii dheer in lacagtaas ay saddex laab ka badan tahay dhaqaalaha ay Kenya miisaaniyadda sannadlaha ah ugu qoondeysay dhismaha guryo qarashkooda la awoodi karo.
Xubno ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa aaminsan suurtagalnimada in saraakiishu ay ka faa’iideysteen halista la xiriirta Al-Shabaab, si ay u boobaan dhaqaalaha dowladda.
Qaarkoodna waxay su’aal ka keeneen sida loo hubi karo in darbigaas uu joojinayo khatarta Al-Shabaab ugana ilaalin karo dagaallameyaasha kooxdaas inay u soo gudbaan Kenya.
Dhinaca kale xildhibaannada baarlamaanka Kenya ee laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari ee uu saameynayo darbiga siliga ah ee laga dhisayo xadka ayaa sheegay in gabi ahaanba ay kasoo horjeedaan mashruucan.
Safiya Abdinuur oo baarlamaanka u matasha deegaanka Ijaara ayaa wareysi ay siisay BBC-da ku tidhi: “Annaga haddaan nahay xildhibaanadii laga soo doortay gobolkaas waxaan leenahay; ‘ma jiro wax dhib ah oo noo dhaxeeya annaga iyo Soomaaliya, waxaan nahay dad walaalo ah oo uu xiriir fiican ka dhaxeeyo, marka innagoo uu heshiis iyo wanaag badan noo dhaxeeyo way adagtahay in darbi dhexdeenna laga dhiso’, sidaas awgeed annagu ugu horreynba waan diidan nahay in darbiga la dhiso”.
Xildhibaanadda ayaa sidoo kale noo sheegtay in baarlamaanku ay hadda ku howlan yihiin sidii ay u ogaan lahaayeen qaabka loo isticmaalay lacagta iyo cidda isticmaashay.
“Mas’uuliyiinta wasaaradda amniga u xilsaaran dalka ayaan hadda ka sugeynaa in naloo sharraxo meesha ay lacagta ku baxday iyo sida ay u isticmaaleen, labo wasaaradood ayaa hadda farta lagu fiiqayaa laakiin marka aan macluumaad buuxa helno unbaan eegi doonnaa tallaabada xigta”, ayey tidhi Safiya Abdinuur.
Fadeexadda waaxda difaaca
Saraakiisha wasaaradaha amniga iyo gaashaan dhigga ayaa la filayaa in culeys lagu saaro sidii ay sharraxaad uga bixin lahaayeen arrintan oo dadka arrimaha gobolka Falanqeeya ay ku tilmaameen fadeexad culus.
Dr Deerow Aadan Cali oo ka faallooda Siyaasadda Kenya ayaa BBC-da u sheegay in 10km oo kaliya loo isticmaalay kala bar ka mid ah dhaqaalihii guud ee loogu talo galay mashruucan.
“8 bilyan oo shilinka Kenya ah ayaa loo qoondeeyay mashruuca dhismaha darbiga xuduudda, hadda waxaa la sheegayaa in ku dhawaad 4 bilyan la isticmaalay masaafaha la dhisayna uu yahay 10km kaliya, marka arrintan waxay dhabar jab ku tahay difaaca waddanka”, ayuu yidhi.
Dhinaca kale wuxuu sheegay in Kenya ay ku deg degtay mashruucan.
“Waxaa meesha ka maqneyd in dowladda Kenya ay wadatashi la sameyso dalalka darbiga noocaas ah horay looga sameeyay, sida Mareykanka iyo Mexico oo silig loo dhaxeysiiyay meelaha qaar, Israa’iil iyo Falastiin, Suuriya iyo Pakistan. Marka aad eegto dadka aqoonyahannada ah ee ku xeel dheer arrimahan waxay sheegayaan in waddamadaas aysan waxba ka faa’iidin darbiga la sameeyay”, ayuu yidhi Dr Deerow.
Sannadkii 2015-kii ayuu baarlamaanka Kenya ansixiyay in darbi xannibaad ah laga dhiso xadka dheer ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, si wax looga qabto amni darrada kusoo kordheysay dalka Kenya oo markaas loo aaneynayay in ay ka dambeeyaan kooxo kasoo tallaabo dhinaca Soomaaliya.
Shirkada Telosom oo Casriyaysan Adeegyadaeedii
Daawo, dalkii sadexaad ee Afrika ah ee Hirgaliya warshad Sifaysa saliida qaydhin ayaynu nahay, Agaasimaha bangiga Dhexe e Somaliland
ISGOOSYADA WADOOYINKA BERBERA EE AAY KU KULMAAN 4HAAD OO LOO SAMAYNAYO DAWAARADO AMA GOOLADO CASRI AH OO BABUURTU ISKU WAYDAARATO IYO ENG CALI YAASIIN OO KA WARAMAY
Somaliland port authority manager Saed Hassan Abdillahi has participated international port conferences organized by United Nations held in Germany- Hamburg after received official invitation”Ismail Lugweyne
Somaliland port authority manager Saed Hassan Abdillahi has participated
Laba Sanadood ka dib -dhamaan Mashaariicdii ku lifaaqnaa mashruuca DPW ma waxay ku soo urureen Waddo la dhaqax dhigaayo?. qalinkii A/rahman fidhinle UK
Markaad dhugato nuqulkii heshiiskii DPW iyo JSL wada galeen sanadkii
Haweenay Norwejiyaana oo aflagaadeysay Haweenay Somaliyada oo xabsi & ganaax la isugu daray
Haweeney 70 jir norwiji ah ayay maxkamadda magaalada Bergen ku xukuntay 24 beri